पुरुषले गर्दा मज्जा हुने सेक्स, महिलाले गर्दा किन अपराध ? : कंगना | Emedia Hub UK
गायिका बबिना किरातीलाई नजिकबाट नियाल्दा (भिडियो)
सँगीतमा जसले रियाज गर्छ उसले राज गर्छ : गायक सुरेश लामा
Home Entertainment Bollywood पुरुषले गर्दा मज्जा हुने सेक्स, महिलाले गर्दा किन अपराध ? : कंगना
पुरुषले गर्दा मज्जा हुने सेक्स, महिलाले गर्दा किन अपराध ? : कंगना
Posted By: Prakash Raion: September 20, 2017 In: Bollywood, Entertainment, News, Photo NewsNo Comments
बलिउडकी निडर र बिन्दास नायिकाको रुपमा लिइन्छ कंगना रनौतलाई । सटिक विचार व्यक्त कंगना सेक्सिजम, फेमिनिज्म र नेपोटिज्ममा कंगना निकै खुलेर बयान दिने गरेकी बारे उन्को चर्चा हुने गरेको पाईन्छ ।
केही समय अघि कंगनाले एक कार्यक्रममा फैलिएको पुरुष प्रभुत्व मुद्दालाई उठाएकी छिन् । उनका अनुसार फिल्मी क्षेत्रमा महिलालाई पुरुषभन्दा कम दर्जा दिइन्छ ।, यो विषयमा विभिन्न अनलाईनहरुले चर्चा गरेका छन ।
‘बलिउडमा महिला र पुरुषलाई दोहोरो दृष्टिकोणमा हेरिन्छ ।’ कंगनाले उदाहरण दिँदै भनिन्, ‘केही यस्ता कुरा छन् जो पुरुषले गरे त्यसमा कसैलाई आपत्ति हुँदैन र त्यहि काम यदि महिलाले गरिन् भने पूरा हल्लाखल्ला मच्चिन्छ । महिला र पुरुषबिच एक सीमा कोरिएको छ ।’
कंगना थप्छिन्, ‘पुरुषका लागि सेक्स गर्नु एक मज्जा हो, यस्तै महिलाका लागि यो अपराधसमान मानिन्छ । ग्ल्यामरको दुनियाँमा पनि यस्तै दृष्टिकोण छ । यदि छोरा प्लेब्वई छ भने कसैलाई कुनै आपत्ति छैन । यस्तै छोरीले बिकिनी लगाइन् भने त्यसमा रोक लगाइन्छ ।’
केही समय अघि कंगना रनौतको फिल्म सिमरन रिलिज भएको छ । फिल्मले पहिलो विकेन्डमा १०।६५ करोड भारुको कमाई गरेको छ । यसमा कंगना एक चुल्बुले र बिन्दास गुजराती महिलाको भूमिका निभाइरहेकी छिन् । फिल्मलाई हंसल मेहताले निर्देशन गरेका छन् ।
नेपथ्य ब्याण्ड फेरी दक्षिण कोरियामा
हङकङमा दर्शकलाइ यसरी झुमाईन सरस्वती लामाले
ग्लामरस नृत्यको चर्चामा माला लिम्बु
अशिस्माले गरिन बबाल !
बेलायतमा गायन प्रतिभाको खोजि “एभरेस्ट आइडल”को पहिलो अडिसन (फोटो फिचर)
कार्यकर्ता पक्राउ गरिएकोमा विप्लवको आपत्ति
कति उम्मेदवारीले लिए फिर्ता ? हेर्नुस्
एभरेष्ट ‘म्युजिकल ब्लाष्ट’ का कलाकार बेलायत आईपुगे
बेलायतमा सिसेक्पा तङ्नाम भब्य सम्पन्न
यस्तो छ डोनाल्ड ट्रम्पको रङ्गिन परिवार (फोटो फिचर)